Iko hakuna kudzokera kumashure: Apple inomira kusaina iOS 10.3.3 | IPhone nhau
Iko hakuna kudzokera kumashure: Apple inomira kusaina iOS 10.3.3
Kwemavhiki maviri, iOS 11 yave ichiwanikwa kurodha pachena kune vese vashandisi vane zvishandiso zvinoenderana uye senguva dzose, vakomana vanobva kuCupertino wamira kusaina iOS 10.3.3Neiyi nzira, kana iwe wanga uchisangana nematambudziko nekushanda kwechishandiso chako neyegumi neimwe vhezheni yeIOS, hauchakwanise kudzokera kune yazvino vhezheni yeIOS 10 iyo Apple yaisayina.
Iwe zvakare haugone kudzokera kuIOS 11.0, se Apple yakamira zvakare kusaina, saka sarudzo yega iripo ndeyekugara sezvatiri kana kudzokera kune yekutanga iOS 11 yekuvandudza, nhamba 11.0,1, diki yekugadzirisa iyo inogadzirisa matambudziko eMail neAptlook mail.
Vazhinji vanga vari vashandisi avo mushure mekuvandudza vaona mabhatiri emidziyo yavo akatanga kudonha zvakanyanya uchienzaniswa neshanduro yazvino yeIOS. Dambudziko iri rave rakajairika nguva dzese Apple painoburitsa vhezheni nyowani yeIOS, saka kambani inoita kunge isisatarise kune vashandisi vanoratidza kusagadzikana kwavo mune izvi, kunyangwe hazvo neIOS 11 huwandu hwekunyunyuta hwawedzera zvakanyanya.
Mushure mekumira kusaina iOS 10.3.3 uye iOS 11.0, kana tichida kudzoreredza chishandiso kuburikidza iTunes, iko kunyorera kunotora iOS 11.0.1 woenderera nekuisirwa kwayo. Nepo chiri chokwadi icho tinogona kumira ne ipsw.me uye kurodha pasi iOS 10.3.3 kana iOS 11.0, iko kusingabatsiri kufamba nekuti kana uchigadzira iyo terminal, kana kumisikidza kwapedza, maitiro aya haazoitwe nekuti Apple yamira kusaina.
Izvi zvitsva haina kukanganisa vashandisi vejeri, sezvo vhezheni yekupedzisira ichienderana neiyi nzira yekusununguka kuiwana, iri iOS 10.2, vhezheni iyo Apple yakamira kusaina mwedzi yakawanda yapfuura. Chinhu chega chavanogona kuita kumirira kuti vaone kana iOS 11 iine rombo rakakwana kuti igamuchire kupunzika kwejere pakutanga kwegore rapfuura, kupunzika kwejeri kwakatora anopfuura mwedzi mina kusvika pamusika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Iko hakuna kudzokera kumashure: Apple inomira kusaina iOS 10.3.3
Takakwenya. Kugara neiyi isingagumi beta inonzi iOS 11.
Iyo iPhone X inodarika zvese FCC zvinodzora kuti isvike pamusika
Podcast 9x05: Dambudziko rekugadzirisa